Soomaaliya iyo Masar oo Heshiis ku saxiixday Qaahira. – Idil News
Soomaaliya iyo Masar oo Heshiis ku saxiixday Qaahira.
QAAHIRA (IDIL NEWS)-Wasiirada Caafimaadka dalalka Soomaaliya iyo Masar Drs. Fowzia Abiikar iyo Drs Hala Zaid ayaa magaalada Qaahira ee Xarunta dalka Masar ku kala saxiixday heshiis Baratakool ee iskaashi una dhaxeeya wasaaradaha Caafimaadka ee labadan dal.
Heshiiskaan ay labada wasiir kala saxiideen ayaa ka tarjumayaa sii horumarinta cilaaqaadka dalalka Soomaaliya iyo Masar, loo gaar ahaan sidii Wasaaradda Caafimaadka Somaaliya ay dowladda Masar ugu taageeri laheyd horumarinta Caafimaadka ee dhinaacyada badan leh.